Maamulka Gobolka Banaadir Oo Dib u Furaya Waddooyinkii Loo Xirey Doorashooyinka – Goobjoog News
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa ku amray guddoomiyeyaasha degmooyinka in ay furaan dhammaan waddooyinka loo xirey doorashooyinka iyo sidoo kale caleema saarkii madaxweyne Farmaajo.
Waxa uu tilmaamay guddoomiyaha in waddooyinkaasi loo xirey arrimo amniga ku saabsan maadaama dalka doorasho ku jirey, waxaana uu sheegay in meel walbo oo xiran looga baahan yahay guddoomiyeyaasha iney furaan.
“Waxaan ognahay xilliyadii doorashada lagu jirey amniga dartiis meello badan ayaa loo xirey, waxaan leenahay waddo walba oo muhiim ah oo cad ama Laami ah in laga qaado waxyaabaha yaalla, maamul walbo oo degmo u baxaan iney xaafadahooda galaan oo ay qaadaan waxyaabaha shacabka ku dhibtoonayaan, laamiyadii xirnaa wey furan yihiin kuwa dhimanna waa la furayaa” ayuu yiri gudoomiye Jimcaale.
Waxaa jira jidcadayaal badan oo ku yaalla degmooyinka magaalada Muqdisho oo illaa hadda aan laga qaadin dhagxaantii iyo sidoo kale carradii uu maamulka gobolka ku jiray xilligii doorashada.
Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aad ugu dhib qabay waddooyinkaasi xiran, balse waxay hadda rajeynayaan in dib loo furo maadaama maamulkii xirey hadda ay sheegeen in la furayo.
Cadaado Iyo Baydhabo Oo Doorashada Aqalka Hoose Uu Dib U Dhac Ku Yimid
Vczrte swoguj buy generic cialis online over the counter cialis
Yyeueg hgnycu Viagra overnight rx pharmacy
how much is viagra in mexico buy viagra with mastercard how...
viagra 10 mg tablet online generic viagra prescription buy g...
female cialis online cialis 5 mg dopo prostatectomia cialis...
who owns hydroxychloroquine patent https://hydroxychloroquin...